Ny asa fiarovana any Dubai G4S, World Security no ampiharina anio
Aprily 22, 2018
Asa ao amin'ny dubai ho an'ny Alzerian
Aprily 29, 2018
Asa fiarovana any Dubai
Asa fiarovana any Dubai sy any Emirates Arabo Mitambatra. Iray amin'ireo lohahevitra mafana indrindra ho an'ireo olona nitady asa. Raha mitady asa ianao. The asa fiarovana any Dubai mety ho safidy tsara ho anao. Amin'ny lafiny iray, ny andrasanay dia manantena ny hanampy anao. Izahay dia manampy ireo mpikaroka manerana izao tontolo izao. Indrindra avy any Afrika Atsimo ary Mpikaroka momba ny asa any Inde ao Dubai ary miaraka amin'ireo mpanao gazety Pakistane vaovao.
Dubai City Company foana manome tanana amin'ny fikarohana karakara. Ny ekipanay mitarika mandrakariva ny mpikaroka asa hitady asa fiarovana any amin'ny UAE. Manantena izahay, fa ny ekipa manam-pahaizana manokana dia afaka manampy anao mandritra ny fikatsahana asa. Ao amin'ny tanàna Dubai, dia afaka manana orinasa be dia be ianao matihanina. Mitady asa amin'ny orinasa toa ny G4S, Haute Security, Cyber ​​Security ary ny orinasa Dubai Security Companies.
Noho izany dia ao an-tsaina, tokony hanandrana am-pahombiazana ny antsika isika torolalana feno momba ny fomba hahitana asa fiarovana any Dubai. Ny orinasa no loharano lehibe indrindra orinasa izay tokony handefa ny famerenana. Amin'izao fotoana izao any Dubai sy Abu Dhabi, misy ny faratampony mpanan-karena ho an'ny security asa in Dubai ?.
Mazava ho azy fa ao amin'ny UAE dia a tsena mihamitombo ho an'ny entam-barotra. Ary miaraka amin'ny fahatongavany izao ho an'ny persona VIP. Ary koa, ny tsena mitombo dia ho an'ny orinasa vaovao. Ho an'ny olona VIP, ary olona mpandraharaha kilasy. Mila mpiambina ireo olona rehetra ireo.
Misy maro fomba fitadiavana asa. Indrindra raha hitarika anao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Ireo mpitsoa-ponenana vaovao izay hampiasaina dia afaka manantena tombontsoa maro. Ny iray amin'ireo ohatra ireo dia asa miorina tsara Dubai Airport fiarovana. Rehefa hampiasa orinasa Dubai ny orinasa vaovao. Homen'izy ireo a fifanarahana tsara mandritra ny fotoana maharitra.
Inona no ilako ho mpiambina?
Mba ho lasa mpiambina fiarovana any Dubai. Ilainao mba hanana mazava ho azy ny fepetra sasany sy ny traikefa. Ireo mpiambina mpiambina izay maniry ny hiasa any Emirates. Na aiza na aiza izy ireo eo an-toerana mpiasa na vahiny. Tsy maintsy mandeha izy ireo mandritra ny herinandro mandritra ny herinandro mandritra ny ora 36 amin'ny fampiofanana ara-teoria sy azo ampiharina. Ny Akademia Polisy ao Dubai mitantana ny dingana 3 ny fanamarinana. Ny manam-pahefana eo an-toerana dia voazaha amin'ny fanadinana telo.
Ny vava rehefa mila mamaly fanontaniana. Dia hanoratra fanandramana sy fanombanana fahalalana azo ampiharina. Jereo ny toro-hevitra ao amin'ny Ahoana ny fandinihana fitsapana Eto. Ary raha a kandidà nahomby dia handalo ny fitsapana rehetra 3. Ny fikambanana Britanika momba ny fanabeazana sy ny sampana dia hanome antoka anao ny hanomezana mari-pankasitrahana ny akademika ho lasa mpiambina.
Ny fandaharam-potoana 3 dia ahitana sokajy momba ny fanadihadiana heloka bevava. Ahoana ny fampiasana fitaovana fiarovana. Ahoana no hitantanana ny fiarovana amin'ny afo sy ny fomba fikarohana fiara sy trano. Amin'ny lafiny tsara ho an'ny fiarovana jobs in Dubai. Na dia hianatra mihoatra ny 50 isan-jaton'ny lesona aza ianao dia azo ampiharina. Ka tsy vitan'ny hoe ho fantatrao hoe iza no ho mpiambina. fa hianatra ny fomba fanaovana azy amin'ny fomba mety ianao.
Inona no hianarako raha manao ny asa fiarovana?
Iray amin'ireo zavatra tena manan-danja izay nianaran'ny mpirotsaka ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia ny fomba handehanana pifidianana. Satria any amin'ny faran'ny lalana dia tsy ny mpitantana ihany no tokony hahafantatra sy ny fomba hiarovana ny toky. Tokony hianatra ianao ny fomba hitantananao ny tenanao sy ny hafa anaty vonjy maika. Ny zavatra ianarahan'ny kandida aloha dia ny fomba hitahirizana ny asan-jiolahy. Amin'ny lafiny tsara, ho lesona avy amin'ny Departemantan'ny polisy izany. Raha mbola misy ny vaovao momba ny fomba hikarohana trano na fiara. Ny ivon'ny olona mampianatra dia ivoho iraisam-pirenena iray an'ny Fiarovana sy fiarovana ao amin'ny Akademian'ny Polisy ao Dubai.
Ireo kilasy sy kilasy manontolo dia omen'ny manamboninahitra polisy. Noho izany dia tsy maintsy manao zavatra araka ny tokony ho izy ianao. Ankoatra izany, tsy maintsy mahafantatra ny fomba hiatrehana izany ianao ao amin'ny orinasa any Gulf. Ny orinasa sasany, ohatra, dia mahazo mpampianatra avy any amin'ny Governemanta sy loharanom-barotra hafa mifandraika amin'izany toy ny Fiarovam-pirenena. Amin'ny lafiny iray, izy rehetra dia hitranga amin'ny akademia avokoa. Ho an'ny asa fiarovana any Dubai, orinasa marobe dia manangana ny atiny fanofanana manokana. Amin'ny lafiny ratsy, tsy maintsy raisina ao amin'ny akademia ny fanadinana.
Ny programa fanofanana manontolo dia nampidirina tany Dubai sy Abu Dhabi ao amin'ny 2005. Fa ny tena nanomboka nizakazaka ny orinasa 2008. Hatreto dia nahavita niofana momba ny mpitandro ny filaminana 57,000 ny akademia. Ity programa ity dia natao amin'ny fomba izay hametrahan'ny ankamaroan'ny olona izany. Noho izany tsy mila manahy be loatra ianao momba izany. Ny tahan'ny mpandalo dia mihoatra ny 80%.
Inona no karaman'ny mpiambina ao Dubai?
Izany dia miankina amin'nyny sasany amin'ireo asa dia AED1,000 isam-bolana ka hatramin'ny 8,000. Ary miaraka amina saina, tokony hanana fijery ianao maso ny fiambenana fiarovana. Any amin'ny Emira Arabo Mitambatra, dia miankina amin'ny inona ny mpampiasa anao. Inona no fanorenanao ankehitriny? Mba hahalalana misimisy kokoa dia azonao atao ny mangataka alalana avy any Dubai sy Abou Dhabi. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahafantarana dia ny anontanio ny hafa momba ny karama. Satria tsy tena fantatrao izany mandra-pahitanao ny tena.
Nahita asa fiarovana any Dubai maka fotoana. Ny fenitra mitady asa dia mila fotoana. Na inona na inona mafy dia hiezaka. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, manodidina ny 6months izany. Ny fotoana laninao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Milalao hatrany amin'ny fankasitrahana anao foana izany, indrindra ho an'ireo vahiny any ivelany.
Amin'ny maha fiarovana anao, afaka manantena karama fototra ianao. Amin'ny lafiny iray, amin'ny traikefa tsara anananao, afaka mitantana karama tena tsara ianao. Amin'ny maha mpiambina VIP tsy miankina anao dia afaka mitantana mihoatra ny 550 hatramin'ny 1,500 AED isan'andro. Amin'ny lafiny tsara, tsy mila izany ianao mba hitantana ny kalitao MBA.
Ahoana no fomba ahitanao fahabangana ara-pahasalamana any Dubai?
Orinasa maromaro izao no mandray karama any Dubai. Raha ny tokony ho izy dia orinasa dia manana asa azo any Dubai sy Abu Dhabi. Indrindra ho an'ny mpanara-maso varavarana sy mpanampy amin'ny fiarovana VIP. Amin'ny ankapobeny dia afaka miteny ianao ao Abu Dhabi sy Dubai mahita orinasa maromaro izay manome ny fotoana mety ho an'ny vahoaka tsara. The Taorian'ny taona maro dia nitombo ny fitomboan'ny tsenan'ny fiarovana any Moyen-Orient.
Amin'ny lafiny tsara, maro manomboka ny seho amin'ny asa. Tao anatin'izany toe-javatra izany dia nitombo ny Emirates niaraka tamin'ny fanakaramana mpiambina ho an'ny mpiasan'ny Expo 2020. Androany dia manomboka mitantana asa tena tsara ho an'ny expats ny faritra GCC. Indrindra miaraka amin'ny orinasa any Abu Dhabi sy Dubai. Ankoatra izany, mihetsika ny expo 2020 ary orinasa vaovao no manangana programa manokana ho an'ny vahiny. Etsy andaniny, tokony hijery mpikarakara orinasa ihany koa ianao. Website tao Careerjet ao Dubai ary Tranonkala Monster Gulf jobs. Tena mendrika ny hampiharina amin'ny CV anao izy ireo.
Joba mpikomy tany Dubai
Ny asa fiarovana any Dubai ho Bouncer no malaza indrindra. Tanànan'i Dubai orinasa manome ny lisitr'ireo asa fiarovana any Dubai. Ka ao an-tsaina izany dia mitantana ny ekipanay antsipiriany momba ny fomba fitadiavana asa amin'ny maha-fiarovana azy any Dubai. Hevero ny tenanao ny fomba hahitana asa ao amin'ny sehatry ny fiarovana. Noho ny Dubai mpiambina, Ny asa sy ny karama dia tsara indrindra any Emirà Arabo Mitambatra.
Ny asa an-jambany ao UAE dia salama tsara amin'ny ankamaroan'ny tranga. Saingy mila manana traikefa tsara ianao. Ankoatra ny mijery tsara sy manofana amin'ny gym. Satria sasantsasany amin'ireo bara fitetezam-paritra ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra mitady fanampiana. Indrindra fa avy amin'ny orinasa fiarovana ivelany. Ny iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ity asa ity dia ny fiarovana ny fananan'ny orinasa. Manampy ireo mpiasa eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fikojakojana ny tontolo iainana azo antoka sy azo antoka nandritra ny fotoana voafetra.
Amin'ny maha-bouncer azy, tsy ho mpikarama an'ady ianao. Raha mbola manao hetsika tsy ara-dalàna amin'ny fiarovana ianao. Mila ataonao antoka, hihazona filaminana ianao hitandrina ny fiainana sy ny fanananao voaro tsara amin'ny fotoana rehetra. Ny mpitandrina dia mandray fepetra mifanaraka amin'ny mpanjifa tsy voaro. Vaovao vaovao tokony omena amin'ny an-tsipiriany amin'izay tranga rehetra mampiahiahy amin'ny hetsika ao amin'ny klioba. Fanampin'izany, faritra patrol rindran-trano na trano na trano tsy tapaka.
Alohan'ny klioba dia hikatona izany. Ny ankamaroan'ireo voantso asa any Dubai mifandraika amin'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny vavahady sy ny vavahadin'ny fiara. Amin'ny alina, mety ho tsy voavaha ilay asa. Fa hiambina ny mpiambina hafa rafitra fanairana ao amin'ny CCTV. Ary ny ankamaroan'ny fakan-tsary sy ny rafitra fiasa dia hijery anao 24h iray andro mijery ny tranga vonjy maika.
G4S tsara indrindra ho an'ny asa fiarovana any UAE
Ny G4S no orinasa lehibe manerantany amin'ny tontolon'ny fiarovana. Iray amin'ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpifindra monina. Ary koa, iray amin'ireo mpampiasa lehibe indrindra eto an-tany maneran-tany. Ny G4S dia iray amin'ireo orinasa tsara indrindra any Afovoany Atsinanana amin'ny asa. Ny orinasa manasongadina indrindra ihany koa G4S ao amin'ny Forbes.
Ny orinasa G4S dia manome tombontsoa maro. From karama fototra sy bonus bola amin'ny mpiasa. Raha mitady vondron'olona be dia be sy mahafinaritra be dia be ianao. Ny orinasa G4S dia ho anao. Iray amin'ny ny toerana tsara indrindra ho an'ny asa maharitra any UAE. Ity ny orinasa izay ahafahanao manova tanteraka ny fiarovana asa any Dubai.
Ao anatin'ny sehatry ny fiarovana ao amin'ny tsenan'i Dubai. Ny G4S dia toerana tsara indrindra ho anao raha mitady asa toerana vahiny ianao. Amin'ny G4S dia tsy hahita ny fahasamihafana sy ny fahasamihafan'ny asa fahafahana any amin'ny orinasa hafa.
Ny vondrona fiarovana voalohany
hafa orinasa liana no vondrona fiarovana voalohany. Ity orinasam-pifandraisana ity matanjaka manaiky fa ny fahombiazan'ny Middle East. Ny vondrona fiarovana voalohany dia miankina amin'ny fandraisana olona vaovao. Ny finoana dia ny finoana sy ny fampandrosoana ny rafitra manontolo. Ny sasany amin'ireo mpitsoa-ponenana dia miara-miasa ity orinasa ity ary miovaova ny fiarovana any Dubai. Ka raha mitady asa asam-piasana any Dubai ianao. Ny vondron'orinam-piarovana voalohany mitarika olona miavaka. Ary lasa iray amin'izy ireo na dia toy ny mpivarotra vaovao aza dia tena mendrika izany.
Ny vondrona fiarovana voalohany no manana ny iraka manan-danja indrindra. Ampio ny Afovoany Atsinanana Satria Ny orinasa dia manome tontolo iainana miasa. Miaraka amin'ity orinasa ity, azonao atao hitantana ny tanjon'ny tsirairay. Ny ankamaroan'ny mpiasa dia manatsara ny fototry ny fahaizany ary mamporisika ny fitomboan'ny tena manokana. Ny fiarovana voalohany Azo atao tsara ny asa any Dubai. Ankoatra izany, ny programa fampandrosoana dia tohanana amin'ny tsena maromaro ao Emirà Arabo Mitambatra.
Ity orinasa ity dia miasa tsara mba hiantohana ny mpizahatany any UAE. Ireo vondrona fiarovana voalohany dia lasa orinasa manerantany amin'ny fampiofanana sy fitaovana vaovao. Mandritra izany fotoana izany, izy ireo dia azo alaina amin'ny olon-drehetra rehetra ao anatiny ny orinasa sy ny mpiasa vaovao. Ireo olona misahana fifanarahana marobe manerana ny fikambanana. Ho an'ny tanjom-pitantanana ny fifanekena ara-bola ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, ny orinasa manamboatra ny mpiasa fomba vaovao ho an'ny fampandrosoana ny asany. Ho an'ny farany, io orinasa io dia mirehareha amin'ny kolontsain'ny orinasa.
Alefaso azafady ny departemantan'ny HR mifamatotra ny CV misy anao info@firstsg.com.
Any amin'ny serivisy fiarovana any Hawk, orinasa manakarama iray any UAE. Tao anatin'ireny toe-javatra ireny, Ny fahafahana miasa dia misokatra ho an'ny vahiny. Ny toerana misy an'io orinasa io dia ao Emirà Arabo Mitambatra. Orinasa tsara mba hiasa ho toy ny andevo. Satria ny orinasa dia manana fomba tsy manam-paharoa sy samihafa. Indrindra ho an'ny mpiasa vaovao any Dubai, Sharjah sy Abu Dhabi.
Ny orinasan-tserasera dia manana toerana samihafa toerana ao anatin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Mety ho mpiasa be dia be izany manerana ny Emira Arabo Mitambatra mahita asa any Dubai. Amin'ny ankapobeny, raha toa ianao mahaliana ho ampiasaina amin'ny iray amin'ireo mpampiasa ambony ao amin'ny orinasa fiarovana. Ny orinasa fiarovana Hawk dia afaka manampy anao amin'ny fampivelarana ny tenanao ho mpitsabo fiarovana.
Betsaka ny tombontsoa azonao azonao avy amin'ny orinasa fiarovana any Hawk. Hatramin'ny nanatevin-daharana anao ny fiofanana ary Manomboka mampiroborobo ny asanao manokana miaraka amin'ity orinasa ity. Mazava ho azy, ho hitanao fa manana drafitra tsara ianao. Tokony ho tonga miaraka amin'ireo serivisy fiarovana any Hawk any Emirà Arabo Mitambatra ianao. Koa ity orinasa ity tsara ho an'ny fifindra-monina ao Dubai.
Alefaso ny resadresanao Email: hr@hawksecurityservice.com
Mitandrema ny fiarovana an-trano
Ny Security Guard Security Services dia manome vahaolana samihafa momba ny fiarovana. Azonao atao ny mipetraka amin'ny fiarovana anao asa any Dubai na Abou Dhabi. Amin'ny ankapobeny, ny Guard Force Security Service dia nankatoavin'ny Departemantan'ny polisy miaro ny filaminana (DPS) Dubai. Ny orinasa ity dia kinendrika ho lasa lehibe indrindra ao amin'ny Emirates Arabo Mitambatra. Miaraka amin'ny Security Force Security Afaka manana asa ianao amin'ny maha-mpiasa na mpanara-maso azy.
Amin'ny lafiny ratsy, mandritra ny androm-pivoriana miaraka amin'ity orinasa ity. Ianao dia mila dia fenoy ny fepetra faratampony ho lasa mpiasa. Ny Security Guard Service dia manana mpanjifa iraisam-pirenena sy avy any amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Afaka manana fahafahana hanao asa ho anao ianao ao anaty isan-karazany ny indostria. Rehefa ela ny ela dia afaka misafidy amin'ny fivarotana, fitantanam-bola na asa na amin'ny fiarovana ny fampianarana ianao. Mandraka ankehitriny ny orinasa no manangona ho an'ny orinasa fandraisam-bahiny. Eo am-piandohana, ireo orinasa ara-barotra sy sehatra indostrialy hafa dia miara-miasa amin'ny Guard Force Security Service.
Manakarama koa izy ireo Asa an'ny CCTV any Dubai
Ireto misy rohy tokony halefa http://guardforce.ae/career/
Nanome izao ny orinasa City ao Dubai mpitari-dalana tsara ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Dubai mitsotra. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo mpitarika ianao izao, toro-hevitra sy asa any amin'ny United Arab Emirates amin'ny fiteninao.